Fikarakarana fampisehoana : Hanolotra tolo-dalàna eny amin’ny parlemanta ny SYNOPS -
AccueilVaovao SamihafaFikarakarana fampisehoana : Hanolotra tolo-dalàna eny amin’ny parlemanta ny SYNOPS
Fikarakarana fampisehoana : Hanolotra tolo-dalàna eny amin’ny parlemanta ny SYNOPS
20/01/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Nijoro ny volana jolay 2012. Nanavao ny biraony ny sendikan’ny mpandraharaha eo amin’ny fikarakarana lanonana eto Madagasikara na ny SYNOPS. Anisan’ireo andraikitra lehibe horaisin’ny birao vaovao tarihin-dRakotondravaoharisoa Modeste avy amin’ny M Production ny fanolorana tolo-dalàna eny amin’ny parlemanta hamaritra ny tontolon’ny fandraharahana ny fampisehoana, ka ireo izay tena velontena amin’izany asa izany ihany no afaka manao io asa io. « Anisan’ny dingana hirosoanay amin’izany ny fanisana ireo mpikarakara hetsika manerana ny Nosy sy ny fanampiana azy ireo ho velotena amin’ny asany », araka ny fanamarihan’ny filohan’ny Synops. « Sehatr’asa mandeha, ary manatsara ny toekaren’ny firenena ny fikarakarana fampisehoana. Ankoatra ny tombontsoan’ny mpanakanto, indrindra ny mpihira, dia mamelona olona maro mivantana sy ankolaka io sehatra io » hoy ihany izy. Na dia miroborobo aza ny asa, dia andraikin’ny Synops no fametrahana ireo mpisehatra rehetra ho velotena amin’io asa io.
Anisan’ireo tanjon’ny birao vaovaon’ny Synops ao anatin’ny roa taona hitondran’izy ireo ihany koa ny fiarovana ny asa sy ny mpiasa amin’io sehatra io, fanatsarana sy fampivelarana ny asa ary fananganana fenitra ifampifehezana ary ny fanokafana tranonkala manodidina ny sendika sy ny asan’ny fikarakarana lanonana. Etsy ankilan’izay anefa dia nanambara ihany koa ireto birao vaovao ireto fa hijoro ho solontenan’ny mpikambana eo anoloan’ny fanjakana sy ireo mpandraharaha amin’ny sehatra hafa mila ny traikefan’ny mpikambana. Nanamarika ny filohan’ny Synops fa « tsy manana firehana politika na ara-pinoana ny sendika, ary miara-miasa amin’ny rehetra ».